IBower Cottage, iWitta, iQueensland - indawo yokuphola esemaphandleni - I-Airbnb
IBower Cottage, iWitta, iQueensland - indawo yokuphola esemaphandleni
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJean
Yonwabela ubumnandi bomlilo wamaplanga, iintaka kunye nendlu esemaphandleni entle. Ukusetyenziswa okukhethekileyo kweBower Cottage, ivenkile ezimbini, enomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, indlu esemaphandleni esemaphandleni. Iqulethe yonke into ibe isetyenziswa nguwe wedwa ibe inekhitshi/igumbi lokuhlala elivulekileyo, isitovu seenkuni, i-smart TV kunye neminyango evulekileyo kwiveranda enkulu egqunyiweyo ene-BBQ. Igumbi lokuhlambela elinento yonke liphela ezantsi ibe phezulu ligumbi lokulala elikhulu elibethwa ngumoya elinebhedi enkulu, iingubo zombane neveranda. Abanikazi baya kuqwalasela izicelo zokuzisa izinja ezincinci.
Le ndlu inekhitshi elinento yonke, iWiFi yasimahla kunye nesofa ekwayibhedi yezinye iindwendwe ezantsi. Xa iindwendwe zifika zibuliswa ngebhasikiti enee-biscuits ezenziwe ekhaya kunye ne-marmalade, itshokholethi, ikofu yasekuhlaleni, isonka, ibhotolo kunye nezinto eziqhelekileyo zeti, ikofu, ubisi kunye neswekile ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo. Indlu esemaphandleni ibizwe ngegama le-Bower bird 's bower ekwimitha eyi-1 ukusuka kumnyango wangaphambili kwaye igadi izele ziintaka neentaka imini yonke. Kukho iihektare ezimbini zegadi, i-brazier yokonwabela umlilo phantsi kweenkwenkwezi, ii-chips, umlambo ojikeleza amacala amabini omda kwaye unokubona iidrowa zamanzi, amaxethuka kunye namafudo ezulazula egadini.
IBower Cottage iyi-8 kms. ukusuka embindini weMaleny. Uhamba nje imizuzu eyi-10 ukusuka endlwini yiWitta General Store enika ikofu, amaqebengwana, amaqebengwana, amaphephandaba, thatha ukutya kwaseIndiya kunye nababuki zindwendwe abanobuhlobo. IMaleny yidolophu entle esemaphandleni eneevenkile zokutyela ezininzi, iivenkile zokutyela, iivenkile zezinto zobugcisa, iivenkile zeencwadi, iigalari kunye nee-boutique. Indawo eyingqongileyo ibonakala kakuhle kwiiNtaba zeGlasshouse kwaye kulula ukuya kwiiGardiner 's Falls, eMontville naseFlaxton kwaye nje imizuzu eyi-30 ukuya kwidolophu engaselunxwemeni yaseCaloundra nemizuzu eyi-45 ukusuka eMooloolaba naseMaroochydore.
Sikwahlala kumahektare ayi-2 kodwa asikwazi ukubona okanye ukuva indlu esemaphandleni esendlini yethu Ifikelelwa kwindlela yokungena esetyenziswa nangabanye abantu kwaye iyimfihlo. Sifumaneka ukuze sincede nanini na kwaye izinja zethu ezimbini ezintle (iGolden Retriever yabantu abadala kunye neGolden Retriever) kunye neecooks eziyi-7 zisenokutyelelwa kodwa siyaqonda ukuba mhlawumbi uza kuphumla kwingxolo kunye nokuxakeka kobomi obuqhelekileyo, ngoko siza kukushiya unoxolo.
Sikwahlala kumahektare ayi-2 kodwa asikwazi ukubona okanye ukuva indlu esemaphandleni esendlini yethu Ifikelelwa kwindlela yokungena esetyenziswa nangabanye abantu kwaye iyimfihlo.…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Witta